usoro ihe eji eme ka ikpo oku di elu, ibido ihe oku, wdg
Home / Ike ntinye aka / MFS usoro ikuku kpo oku
Categories: Ike ntinye aka, Usoro nke usoro ihe efu Tags: ugboro ugboro, ọkara ugboro annealing, ọkara ugboro ibe ya bụrụ, okpomoku oku, usoro ikpo oku, Igwe ngwa ngwa oku, igwe ikuku oku, Ike ikuku oku, Usoro usoro ikuku oku, Ọkara ugboro na-ekpo ọkụ akpụ, mmeri ugboro ugboro, ọkara ugboro preheating
usoro ihe eji eme ihe na ikuku oku
Ọkara usoro ntinye ọkụ ọkụ (MFS usoro) acetized site na 500Hz ～ 10KHz na ike100 ～ 1500KW ， a na-ejikarị ha eme ihe maka ikpo ọkụ ọkụ, dịka mkpanaka ọkụ maka ịkpụzi, agbaze, dabara na preheat maka ịgbado ọkụ. Ruru ya obosara ugboro nso, afọ ojuju kpo oku mmetụta na-adị mfe-enweta site imewe iche ihe niile dị ka penetrating ọchịchọ, kpo oku arụmọrụ, na-arụ ọrụ mkpọtụ, magnetik akpali akpali na na.
Na MFS ọkara ugboro igwe ， yiri oscillating Ọdịdị na-eji. IGBT modul ike akụrụngwa na anyị ọgbọ nke anọ inverting akara teknụzụ na-etinyere iji hụ na elu mma na ntụkwasị obi. A na-anakwere nchebe zuru oke dịka nchebe ugbu a, mmiri na-enweghị nchebe, nchebe okpomọkụ, nchebe nchedo ọkụ, nchebe obere oge na nchedo oge. Mgbe ị na-arụ ọrụ, mmepụta ihe ugbu a, voltage voltage, oscillating frequency na ike nrụpụta ka egosiri na ogwe ọrụ iji nyere aka n'ịmepụta eriri igwe na ịhazi igwe.
Dika ojiji di iche iche, eji isi ihe abuo:
(1) Ọdịdị 1 ： MF generator + capacitor + eriri igwe
A na-anabata ihe owuwu a n'ọtụtụ ụzọ, dị ka mkpanaka igwe induction igwe eji eme oku na agbaze igwe. Ihe owuwu a dị mfe, dị ala dị ala ma dịkwa elu na kpo oku.
N'ime ihe owuwu a, ọ na-abụkarị 3 na 15 mita ọla kọpa dị mkpa iji mee eriri igwe; voltaji nke eriri igwe dị elu na 550V, ma ọ bụghị naanị ya na sistemụ ike, yabụ, a ga-ekpuchi mkpuchi ya nke ọma iji hụ na nchekwa nke ndị ọrụ.
2） nhazi 2 ： MF generator + okpu + transformer + eriri igwe
A na-ejikwa ihe owuwu a mgbe mgbe, dị ka agbaze na agụụ, ọkara ugboro induction hardening machine were gabazie. Site na imewe nke ngbanwe ihe ntụgharị, mmepụta ihe ugbu a na voltaji nwere ike ịchịkwa iji mejuo agụụ ọkụ dị iche iche.
N'ime ihe owuwu a, eriri igwe anaghị echekwa maka ndị na-arụ ọrụ, eriri igwe nwere ike ikpuchi mkpuchi mkpuchi. Ngwunye dị mfe iji mee naanị obere ntụgharị. N'ezie, onye na-agbanwe ọkụ ga-abawanye ụgwọ na oriri igwe.
ụdị Ike ikike mmepụta Ọnụma ugboro ugboro Ntinye ugbu a ọsọ ọsọ voltaji Ụdị ọrụ Mmiri mmiri ibu ibu Dimension
MFS-160 160KW 0.5-10KHz 250A 10-20m³ / h 180KG 800x650x 1800mm
MFS-200 200KW 0.5-10KHz 310A 10-20m³ / h 180KG 800x650x 1800mm
MFS-250 250KW 0.5-10KHz 380A 10-20m³ / h 192KG 800x650x 1800mm
MFS-300 300KW 0.5-8KHz 460A 25-35m³ / h 198KG 800x650x 1800mm
MFS-400 400KW 0.5-8KHz 610A 25-35m³ / h 225KG 800x650x 1800mm
Main e ji mara
Nhazi nzaghachi volta ma were usoro mgbagha usoro LC nke IGBT.
IGBT inversion teknụzụ, ntụgharị ike dị elu karịa 97.5%.
Nchekwa ike 30% ma e jiri ya tụnyere teknụzụ SCR. Na sekit nke resonance usoro, ntinye ntinye na volta dị elu na nke dị ugbu a, yabụ ọnwụ ike dị ala. Soft mgba ọkụ technology etinyere mgbe ịgbanwee ọnwụ dị nnọọ ala.
Enwere ike ịmalite ya 100% n'okpuru ọnọdụ ọ bụla.
100% ije ọrụ, 24hours na-aga n'ihu na-arụ ọrụ ike kacha ike.
Obere nkwekọ na ikike dị elu. Ihe ike na-adịgide mgbe niile 0.95 dị n'elu n'oge igwe na-agba ọsọ.
Nchọpụta ugboro ugboro na-akpaghị aka na teknụzụ na-enyere ike ihe ike ka ọ dị elu n'ogo usoro dum.
Ezi pụrụ ịdabere, IGBT bụ onye n'aka-apụ transistor na ana achi achi inversion na ihe ịga nke ọma na-ewe nchedo ntabi anya; IGBT ejiri site na ụlọ ọrụ infineon, onye ama ama ama ama n'ụwa niile.
Ọ dị mfe ịrụ ọrụ ma debe, IGBT MF induction generator dị mfe iji gbochie ma debe ya n'ihi usoro nhazi sekit ya dị mfe. O nwere nchebe zuru oke.
A nso nke kpo oku oku, ahaziri iche iche nke induction kpo oku dị ka ndị ahịa chọrọ.
Infarared ihe mmetụta.
CNC ma ọ bụ PLC na-achịkwa ihe eji arụ ọrụ maka ngwa ngwa.
Mmiri jụrụ mmiri.
Pneumatic mkpanaka feeder.
Ahaziri dum akpaka kpo oku usoro.
Hot ibe ya bụrụ / akpụ maka nnukwu workpiece.
Ikwesi ike n’elu ihu maka akụkụ buru ibu.
Preheating nke anwụrụ ekwe.
Mgbachi nke ịgbado ọkụ ọkpọkọ.
Agbaze ọla kọpa aluminom na na.
Ada Ada-kwesịrị ekwesị nke uwe nke ala.
Ogologo ugbo onu ogugu maka onu oku
Njikwa Nhazi Na-agbanwe Oge Ntanye 160KW
Ngwongwo Ogologo Oge Ogologo Oge